Su'aalaha La Weydiiyo - Kunshan Qiangdi Qalabka Shiidi doona Co., Ltd.
Sideen ugu kalsoonaan karaa tayadaada?
1. Dhamaan mashiinka waxaa si tijaabo ah loogu tijaabiyaa aqoon isweydaarsiga QiangDi ka hor inta aan la rarin.
2. Waxaan bixinaa damaanad hal sano ah oo ku saabsan dhammaan qalabka iyo adeegga iibka ka dib nolosha oo dhan.
3. Waxaan ku tijaabin karnaa qalabkaaga intaan amarka la dhigin, si loo hubiyo in qalabkeenu ku habboon yahay mashruucaaga.
4. Injineeradeenu waxay aadi doonaan warshadaada si ay u rakibaan una khayaaneeyaan qalabka, dib ugama laaban doonaan ilaa qalabkani soo saaro alaab tayo leh.
Maxay tahay doorkaaga marka la barbardhigo alaab-qeybiyeyaasha kale?
1. Injineeradeenna xirfadeed waxay sameyn karaan xalka ugu habboon ee ku saleysan noocyada alaabta ceeriin, awoodda iyo shuruudaha kuwa kale.
2. Qiangdi waxay leedahay injineero badan oo cilmi baaris iyo injineero horumarineed leh khibrad ka badan 20 sano, awoodeena R&D waa mid aad u xoogan, waxay horumarin kartaa 5-10 teknolojiyad cusub sanad walba.
3. Waxaan leenahay macaamiil badan oo waawayn oo ku takhasusay Agrochemical, Waxyaabaha cusub, qaybta dawooyinka adduunka oo dhan.
Adeeg noocee ah ayaan ku bixin karnaa rakibidda mashiinka iyo tijaabinta? Waa maxay siyaasadeena dammaanad?
Waxaan bixinaa adeeg cimri ah alaabteena mashiinka kadib bixinta, waxaanna la socon doonaa xaaladda mashiinka macaamiisheena kadib rakibida mashiinka guuleysta ee warshadaha macaamiisheena.
Sidee tababar loogu siiyaa shaqaalaheena hawlgalka iyo dayactirka?
Waa maxay shuruudaha shixnad ee aad bixiso?
Waa maxay shuruudaha lacag bixinta ee aad qaadato?
Aaway shirkadaadu? Sideen ku booqan karaa halkaas?